Iiholide zeBeaches® zifuna ukwenza oTatomkhulu bakho iNkwenkwezi elandelayo yeTikTok
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba kunye neehotele » Iiholide zeBeaches® zifuna ukwenza oTatomkhulu bakho iNkwenkwezi elandelayo yeTikTok
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • Resorts • Technology • Tourism • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Amabhishi eeBeaches aqalisa inkqubo entsha yeGrandEscapes eyilelwe ngokukodwa iiholide zomakhulu notatomkhulu emva kwexesha elichithwe ngaphandle.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide iBeaches®, ekhokelela kubunikazi beenkcubeko kubandakanywa zonke iiholide zasekhaya, zibhengeza i-sweepstakes zazo ezintsha ukunceda ukudala "igranfluencer" enkulu elandelayo kwiTikTok.
Le ndawo yosapho inika iholide yamaphupha kunye nesifundo se "Granfluencer" kwiTikTok kwaye sibhiyozela isibonelelo esitsha sokuhamba kweGrandEscapes.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiLwandle iiholide zifuna ukonwabisa ootatomkhulu noomakhulu kunye nabazukulwana babo kwi-intanethi, kwaye zidibanisa iintsapho ezandisiweyo ngokobuqu.
Iilwandle iGrandEscapes yenzelwe ngokukodwa iiholide zomakhulu notatomkhulu eparadesi emva kwexesha elininzi behlukene.
Utat'omkhulu onethamsanqa uya kuphumelela isifundo seTikTok kwenye yezona zinto zidumileyo zeqokobhe eqongeni, @lungeliso, apho baya kufunda ukuba kuthatha ntoni ukwenza iTikTok ibe yintsholongwane kwaye bafike 'Kwiphepha Lakho' kuhambo lwabo lokuya kwiBeaches Resort.
Ngoku ngoNovemba 11, 2021, amalungu osapho angathumela ividiyo yeTikTok katatomkhulu wabo ithuba lokuphumelela isifundo seTikTok kunye neholide ezintlanu zobusuku Iindawo zokutyela elwandle eTurks & Caicos or Jameyikha. Ukungena kwii-GrandEscapes sweepstakes, Abadali mabalandele kwaye bathethe @BeachesResorts Kwi-TikTok kwaye kubandakanya i-hashtag #BeachesGrandEscapes kwiividiyo zabo zeposti yomakhulu notatomkhulu wabo bedanisa, becula okanye bexhuzula kwindlela yangoku.
Ayisiyiyo kuphela iiLwandle iiholide ezifuna ukwenza ulonwabo kootatomkhulu noomakhulu kunye nabazukulwana babo kwi-Intanethi, kodwa ukudibanisa iintsapho ezandisiweyo ngobuqu kuphezulu kuluhlu. Ukongeza kwithuba lokuphumelela iholide yamaphupha ngeTikTok, inkampani yeholide yazisa Iilwandle iiGrandEscapes, yenzelwe ngokukodwa ukhulu notatomkhulu-ongumakhulu eparadesi emva kwexesha elininzi behlukene. Iilwandle iGrandEscape ilungile ngalo naliphi na ixesha lonyaka, kodwa okwexeshana, kukho inkuthazo ekhethekileyo yokubhukisha ubusuku obuhlanu okanye nangaphezulu, okwenziwe ngoku nge-9 kaJanuwari, ngo-2022, ukulungiselela uKuhamba ngo-2022. Ukubhukisha ngelixesha kuya kufumana okhethekileyo " Yenzelwe iiMemori ”ifoto yosapho kunye nokukhethwa kwesidlo sakusasa seSesame Street Character Breakfast kwindawo encinci, iRed Lane® I-Spa manicure ezimbini, okanye i "Kitty Katt" Catamaran Cruise ezimbini ukuba usapho lonke lunokujoyina kwaye luyonwabele.
“Kwiilwandle, ixesha losapho liyinto yonke. Siyawuqonda lo nyaka unzima, ingakumbi kootatomkhulu noomakhulu abathi kumaxesha akutshanje bangababoni abazukulwana babo rhoqo okanye, kwezinye iimeko, hayi kwaphela. Sifuna iintsapho zenzele la maxesha aphosiweyo, kwaye yeyiphi imeko ebhetele ekufuneka yenziwe ngaphandle kweCaribbean yethu entle, utshilo uJoel Ryan, uMlawuli weImixholo yokonwaba kwiiBeaches Resorts. "Injongo yethu kukuba iintsapho zenze iinkumbulo ezihlala zihleli kunye, kwaye ngenxa yokuba iiholide zethu zinento kuye wonke umntu, iGrandEscapes yethu yindlela eqinisekileyo yokubuyisela umakhulu kuTatomkhulu."
Iilwandle zezona ndawo zokugqibela zeholide zootatomkhulu noomawokhulu ukuba baqhubeke nokudibana, kubandakanya ubumnandi kunye nokumanyana ngalo lonke ixesha, kuyo yonke iminyaka. Abantwana banokonwabela ulwandle kwaye IPark Island Waterpark emini, uye kwiXbox® I-Lounge okanye iholo ye-arcade ye-arcade ebusuku. Abona bantwana bancinci banokude bathathe inxaxheba kwizinto abazithandayo IStame Street®abalinganiswa kwaye bonwabele ukuzonwabisa emini nasebusuku kunye nabahlobo babo abanoboya. Ezinye izinto onokukhetha ukuzenza zibandakanya inkqubo yomntwana yokuqubha kunye neeScuba Divers eziqeqeshiweyo kunye neeklabhu zabucala zegalufa zabucala kunye neeklinikhi. uhlobo olunye, oluquka konke uhambo olulungele onke amalungu osapho.
Ukungena kwi-GrandEscapes Sweepstakes, ndwendwela elunxwemene.com/elwandle. Ukubhukisha utyelelo olukhuthazayo lweGrandEscapes beaches.com. Ngolwazi oluthe kratya malunga neholide eNtofontofo ebandakanyiweyo kwiiLwandle, ndwendwela beaches.com.
Ngeendawo ezintathu ezinomtsalane eTurks & Caicos naseJamaica, kunye nendawo yesine eza eSt Vincent kunye naseGrenadines, iiBeaches® Resorts yeyona ndawo ibalekayo kuwo onke amalungu osapho. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiBeaches Resorts zibonelela ngokubandakanywa kumgangatho ongaphezulu kwayo nayiphi na enye inkampani ekuchithela kuyo iplanethi eneendawo ezinamanzi, iXBOX® Play Lounges, iinkampu zabantwana ezikhethekileyo, iiklabhu zasebusuku zolutsha, iiNannies eziQinisekisiweyo, inkonzo yeButler, iRed Lane® Spas, amaziko eAqua aneziqinisekiso zePADI® kunye noqeqesho , kunye ne-Wi-Fi yasimahla. Njengomxhasi oziqhenyayo weSesame Street, iiBeaches Resorts nazo zibonelela ngeCaribbean Adventures kunye neSesame Street®, apho abantwana banokuchitha iholide kunye nabahlobo babo abathandayo kwiqela leSesame Street kunye nemisebenzi yemihla ngemihla kunye nemiboniso yeveki. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zonxweme yindawo efanelekileyo yokuhlanganisana nosapho kunye nemihla yokuzalwa ekhethekileyo ukuya kwinkqubo yomtshato yokutyikitya, iilwandle ezinemitshato eyenziwe ngokwezifiso. Iindawo zokutyela elunxwemeni ziqinisekisa iindwendwe uxolo lwengqondo ukusuka ekufikeni nasekuhambeni kunye neelwandle zePlatinam Protocols zoCoceko, amanyathelo enkqubela phambili kwezempilo kunye nokhuseleko ayilelwe ukunika iindwendwe ukuzithemba okukhulu xa zisiya eholideyini kwiCaribbean. IiBeaches Resorts ziyinxalenye yeSandals Resorts International (i-SRI) enabanikazi bosapho, eyasekwa nguGordon “Butch” Stewart ongasekhoyo, ebandakanya iiNdawo ekuchithelwa kuzo iiNdawo zokuHamba zeSandals, kwaye yinkampani yeCaribbean ehamba phambili kuyo yonke indawo. Ngolwazi oluthe kratya malunga neeLwandle iiholide, ndwendwela beaches.com.